Deganaanshaha Vantaa - InfoFinland
Magaalooyin > Vantaa > Nolosha Vantaa > Deganaanshaha Vantaa
Macluumaadka waxqabadka ee ku saabsan degista iyo guurista
Vantaa waxaa laga helaaa guryo badan oo kala duwan qiimohooduna uu kala duwan yahay. Celcelis ahaan guryaha Vantaa waa ka jaban yihiin qiimo ahaan kuwa Helsinki. Vantaa waxaa ka jira fursado badan oo wakhtiyada firaaqada lagu qaato bey’adana waa lagu dhaqdhaqaaqi karaa. Gaadiidka dadweynuhu si fiican ayuu u shaqeeyaa, xaafadaha magaaalada oo dhanna waa kuwa si nabadgelyo ah loo degi karo.
Vantaa waxaa ku yaal guryaha la kireysto ee magaalada iyo guryaha la kireysto ee gaarka loo leeyahay. Inta badan guryaha la kireysto ee gaarka loo leeyahay waxaa loo helaa si ka fudud sida guryaha la kireysto ee magaalada.
Qiimaha guryaha la kireysto ee Vantaa ku yaal waa kuwa wax badan isbedbeddela. Kirada waxaa saameynta ku leh cabirka guriga, meesha uu ku yaal iyo xaaladdiisa. Inta badan guryaha ka kooban 2 qol iyo jiko ee Vantaa ku yaal waa qiyaastii 700-1000 yuuro bishiiba sidoo kale guryaha ka kooban 3 qol iyo jiko waa qiyaastii 900-1300 yuuro bishiiba. Kirada guryaha la kireysto ee magaaladu waa ka yara jaban yihiin qiimo ahaan guryaha la kireysto ee gaarka loo leeyahay.
Kirada ka sokow, qofka guriga deggan waa in uu bixiyaa biilka korontada, lacagta biyaha, caymiska guriga iyo Interternet laga yaabo in uu ku jiro. Kahor inta uusan heshiiska kiradu billaaban waa in sidoo kale la bixiyaa lacagta dibaajiga (vakuusmaksu), taas oo inta badan ah mid u dhiganta 1-3 bil kiradood.
Faahfaahin dheeraad ah ku saabsan kireysashada guriga ka akhri bogga InfoFinland: Guri kiro iyo Heshiiska kirada.
Guryaha la kireysto ee gaarka loo leeyahay
Kireeyaha guriga ee gaarka ah wuxuu noqon karaa shirkad, urur ama qof caadi ah. Vantaa waxaa laga helaa laga kireeyayaal badan oo gaar ah, kuwaas oo ay ugu waaweyn yihiin Lumo, Sato iyo Avara. Waxaa intaas dheer dad badan oo Vantaa ku leh guryaha la kireysto. Si degdeg ah ayaa guri looga heli karaa kireeyayaasha gaarka ah.
Haddii aad arday tahay, waxaad guriga la kireysto ka codsan kartaa Mu’asasada ardayda ee Soonaha Helsinki HOAS. Haddii aad ka yar tahay 30 sano, waxaad codsan kartaa guryaha Nuorisoasuntoliito iyo Nuorisosäätiö.
Guryaha la kireystoFinnish | Ingiriis
Guryaha la kireystoFinnish
Guryaha la kireysto ee magaalada Vantaa
Guryaha la kireysto ee magaalada Vantaa sida caadiga ah waa kuwa ka jaban qiimo ahaan guryaha ay kireeyaan shirkadaha ama shakhsiyaadka gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee sugitaankooda ayaa noqon kara mid wakhti dheer qaata ugu dambeyntana qaar ka mid ah dadka codsaday ayaa guryaha helaya.
Guryaha la kireysto ee magaalada Vantaa waxaa iska leh islamarkaasna kireeya VAV Asunnot Oy. Codsiga guriga waxaad ka sameysan kartaa bogagga shabakadda VAV Asunnot Oy. Codsigu wuxuu shaqeynayaa afar bilood, markaas kaddibna waa in mar kale codsiga la sameeyo.
Marka guryaha la kireysto ee magaalada la siinayo dadka, safka hore waxaa ku jira codsadayaasha guryaha degdegga ugu baahan. Waxaa sidoo kale xisaabta lagu darsadaa hantida iyo dakhliga soo gala codsadaha, sababtoo ah guryaha waxaa loogu talagalay ugu horreyn dadka dakhliga soo galaa uu yaryahay iyo kuwa hantida yar.
Macluumaad ku saabsan guryaha la kireysto ee magaaladaFinnish | Ingiriis
Macluumaad ku saabsan codsashada guryaha la kireystoFinnish | Ingiriis
Qiimaha guryaha Vantaa ku yaal waa kuwa aad isu bedbeddela. Qiimaha waxaa saameyn ku leh cabirka guriga, meesha uu ku yaal, xaaladdiisa iyo da’diisa. Inta badan guryaha ka kooban 2 qol iyo jiko waxay joogaan qiyaastii 100 000 – 250 000 sidoo kale guryaha ka kooban 3 qol iyo jiko waxay joogaan qiyaastii 150 000 – 300 000 oo yuuro. Guryo kuwan qiimo ahaan ka jaban ama ka qaalisan waa jiraan.
Bogga InfoFinland Guri iibsasho waxaad ka heleysaa macluumaad badan oo ku saabsan guri ka iibsashada Finland.
Waa maxay guri xuquuqda deganaanshaha la leeyahay (asumisoikeusasunto)? Jawaabta waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Deganaanshaha Finland.
Haddii aad dooneyso in aad Vantaa ka codsato guriga xuquuqda daganaanshaha la leeyahay, soo qaado marka hore lambarka nidaamka. Lambarka nidaamka waxaad ku codsan kartaa shabakadda. Sidoo kale waxaad daabacan kartaa foomka codsiga kaddibna gacanta ayaad ku buuxin kartaa.
Marka aad hesho lambarka nidaamka, weydii guryo bannaan milkiilayaasha iyo kuwa guryaha dhista. Macluumaadyada xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Helsinki. Isku wakhti ayaad soonayaal kala duduwan guri ka codsan kartaa.
Waa maxay guri qayb ahaan la leeyahay (osaomistusasunto)? Jawaabta waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Deganaanshaha Finland. Guryaha qayb ahaan la leeyahay waxaad ka heli kartaa bogagga internetka ee guryaha laga raadiyo.
Qashinnada oo dhan laguma ridi karo haanta qashinka ee shirkadda guriga. Tusaale ahaan qalabka guryaha, qalabka korontada iyo rinjiga waa in la geeyaa goobta qashinka lagu uruuriyo. Bogga kierrätys.info ayaad ka fiirin kartaa goobta dib u isticmaalka ee kuugu dhow.
Macluumaad dheeraad ah ku saabsan kala soocidda qashinka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Qashinka iyo dib u isticmaalka.
Haddii ay kugu adagtahay in aad kirada guriga iska bixiso, waxaad caawimaad weydiisan kartaa caawiyayaasha sooshalka degitaanka guryaha ee magaalada Vantaa. Macluumaadka xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Vantaa.
Caawimaadda dhibaatooyinka degistaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad tahay guri la’aan
Haddii aad tahay guri la’aan ama aad halis ugu jirto in aad gurigaada weyso, la xiriir adeegyada sooshalka ee magaalada Vantaa. Macluumaadka xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Vantaa.
Adeegyada sooshalka ee magaalada Vantaa waxaa loogu talagalay dadka deggan ama ku qoran Vantaa.
Adeegyada bulshadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Guryo dadka guryo la'aanta ahFinnish
Haddii uu gurigaadu waxyeelloobo
Haddii uu gurigaadu ku waxyeelloobo tusaale ahaan dab ka kacay ama biyo ku furtay, caymiska guriga ayaa xaaladaha qaar marka lagu jiro magdhaw ka bixin kara kharashka dheeraadka ah ee deegaanka ku baxa. La xiriir shirkaddaada caymiska islamarka ay waxyeelladu dhacdo.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka deegaanka la xiriira waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Dhibaatooyinka degitaanka.
Macluumaadka ku saabsan waxqabadka degista iyo guurista
Bogagga InfoFinland waxaa ku jira macluumaadyo badan oo faa’iido leh oo ku saabsan degitaanka. Waxaad tusaale ahaan macluumaadyo ku saabsan:
guurista ka heleysaa, bogga Markii aad guuraysid
ammaanka dabka iyo waxyeellada dabka ka heleysa bogga Nabadgelyada guriga
kaalmada ijaarka ka heleysaa bogga Kaalmada ijaarka
xuquuqda iyo waajibaadka degitaanka la xriira ka heleysaa, bogga Xuquuqda iyo waajibaadka deganaha
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 24.05.2021 Boggan war-celin ka soo dir